बङ्गालले कहाँकहाँ कसरी कसरी अतिक्रमण गरिरहेको छ त? : जनसतहबाट उठ्न थाल्यो आवाज-‘ भाषिक अतिक्रमण दल र नेताको होइन, भाषा र भाषीको गम्भीर सवाल हो’ - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनबङ्गालले कहाँकहाँ कसरी कसरी अतिक्रमण गरिरहेको छ त? : जनसतहबाट उठ्न थाल्यो आवाज-‘ भाषिक अतिक्रमण दल र नेताको होइन, भाषा र भाषीको गम्भीर सवाल हो’
बङ्गलादेशबाट छिरेका शरणार्थीहरू चिन्हित गर्न र उनीहरूको व्यावस्थापनको लागि बनाइएको ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-बाट दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई ‘टाइटल डिड’ दिनुको कुनैतिक अर्थ के बन्छ? जानकारी पाइएअनुसार कालेबुङ जिल्लामा नयाँ र ठूला अधिकारीहरू जति सबै बङ्गाली पठाइएको छ। दार्जीलिङ जिल्लामा त छँदैछन्। पहाडमा जिटिए छ, यसैको दवदबा हुनुपर्ने हो तर दार्जीलिङमा डिएमको दबदबा छ। कालेबुङमा पनि सबै सरकारी कार्यालयमा ठूला अधिकारी बङ्गाली नै छन्। पुलिस चौकीमासमेत यस्तै छ। यसको अर्थ प्रशासनिकस्तरबाट पनि गोर्खाहरूलाई निगरानी गर्ने र उनीहरूलाई हरेक स्तरबाट दबाउने कुटनीति बङ्गाल सरकारले गरिरहेको छ भन्ने हो। जुन कुरा गोर्खा जाति, संस्कृति र भाषाको लागि अत्तिनै खतरा बनेको छ। बङ्गालको यस्तो नीतिलाई लागू गर्नमा विनय तामाङहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यो अझ जाति, संस्कृति र भाषाको लागि खतरा बनेको छ।
सिलगडी, 8 मई
गोजमुमो प्रवक्ता बीपी बजगाईँले ‘बाङ्लार शिक्खा’-को अन्तर्य खोलेपछि त्यसले जन सतहलाई तताएको छ। मानिसहरू भन्छन्, ‘यो बीपी बजगाईँ, छिरिङ दाहाल वा पार्टी, पार्टीको कुरा होइन, यो जाति र भाषा, र सांस्कृतिक सुरक्षाको सवाल हो। यसलाई बहसमा ल्याएर छिनाफाना गरिनुपर्छ।’
राजनैतिक विश्लेषक बबिता मादेनले भनेअनुसार बीपी बजगाईँले उठाएको मुद्दा स्वागत योग्य छ, तर छिरिङ दाहालको तर्कहरुलाई पनि आँखीओझेल गर्न सकिन्न। ‘बिचारले फरक बाटोमा हिँडिरहे तापनि जातिको मुद्दामाथि कसैद्वारा पनि राजनीतिकरण गरिनु भएन,’ मादेनको तर्क छ, ‘भाषा जस्तो गम्भीर विषयमाथि उठेको मुद्दालाई केवल चुनावी आँखाहरुले हेरिनु हुँदैन। पढाइने संस्थान बाँच्यो भने मात्र नानीहरूले पढ्ने सुविधा पाउँछन्। पहाडमा बङ्गाल सरकारको शिक्षा नीति यति भयानक छ कि अबको केही वर्षपछि पहाडका कतिपय प्राथमिक पाठशालाहरू बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। के कसैले यसबारे सोचेको छ?’
यता पत्रकार अनिल तेलैजाले पनि मूल मुद्दा विनय, जिम्बा, बजगाईँ र छिरिङ दाहालको नरहेर जनताको रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘यो मुद्दा नेताको होइन नेपाली भाषा र नेपाली भाषीको हो। बीपीले फाँड्यो, छिरिडले बजायो जस्ता अर्थहिन कुरामा मूल मुद्दा ओझलमा नपरोस्,’ उनले भनेका छन्, ‘मूल मूद्दा भनेको भाषिक अतिक्रमणको हो। यो मुद्दाले चुनाउको समयमा टाउको उठाएकोले चुनावी चटकमा नै नसकियोस्। किनकी हाम्रा नानीहरूले चुनाउपछि पनि यो पुस्तक पढछन, भाषा ज्ञान सिक्छन्। विरोधीको सबै कुरा बिरोध नै चैं नदेखौं।’
उनीअनुसार बीपी बजगाईँले उठाएका केही बुँदाहरुमा गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ। यसको जवाबमा आएको छिरिङ दाहालको स्पष्टीकरण पनि उत्तिकै सुन्न र मनन् गर्न अनिवार्य छ।
‘दाहालले पाठ्यपुस्तकमा भएको गल्ती सच्याउन पहाडबाट तीन जना नेषाली भाषी विज्ञको टोली कलकत्ता गएको भनेकी छन्। हाम्रा पत्रकार साथीहरूले ती तीन जना विज्ञ टोलीका सदस्यहरूसित भेटेर कुरा गरून्,’ तेलैजाको सुझाव छ, ‘कस्ता कस्ता समस्या रहेछन्? छलफलमा ल्याउन्। दाहालले नयाँ पाठ्यपुस्तकमा यस्ता गल्ती नदोहोरिने बचन दिनु भएको छ। यसलाई बुझौं।’
दाहालले उल्लेख गरेको टोलीका एक सदस्य सुरेन्द्र थिङसित खबरम्यागजिनले सम्पर्क गऱ्यो। यसबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘बङ्गाल सरकारले भूलहरू सच्याउनमा उस्तो गम्भीरता देखाउँलाजस्तो त लागेको छैन। यद्धपि, अधिकारीले ‘अर्को वर्ष हेरौंला’ भनेका छन्।’
आफूहरूले यसै वर्ष पाठ्यक्रम सच्याएर बुझाएको अनि 2020 मा संशोधित पाठ्यपुस्तक पुनर्प्रकाशन गर्ने नगर्ने जिम्मा सरकारको नै रहेको जनाएका छन्।
‘बाङ्गला सिक्खा’-को सन्दर्भमा सही बङ्गालले कसरी अतिक्रमण गरिरहेको छ भन्ने कुरा खुल्दै आइरहेको छ।
यस्तै अतिक्रमणहरू अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि भइरहेको अनुमान गरिएको छ। विस्तारै त्यसबारे पनि खुलासा हुने र बहस सतहमा आउनसक्ने सम्भावना बढेको छ।
यद्धपि, बङ्गालले गोर्खाहरूलाई भाषामार्फत पसेर सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउने चलखेल थालेको खुलासा भने भएको छ। इतिहासलाई ध्यानमा राखियो भने बङ्गाल सरकारको नियत पहाडमाथि कहिल्यै राम्रो छैन। पहाडका गोर्खाहरू सङ्गठित बनेमा बङ्गालको ‘होलिडे डेस्टिनेशन दार्जीलिङ’ हातबाट फुत्किने डर राज्य सरकारमा आएका जोकोही बङ्गाली प्रशासकलाई लाग्ने गरेको छ।
यही डरको कारण गोर्खाहरूलाई शक्तिहिन, असङ्गठित, अशिक्षित, आर्थिक कमजोर बनाउने सरकारको अनेकौं कुटनीति चालिरहेको छ। आन्दोलन असफल बनाउनदेखि लिएर गोर्खा शक्तिलाई नै टुक्राएर विस्तारै गोर्खाहरूलाई उपनिवेश बनाउने कुटनीति चालिरहेको छ।
मतगणनामा नेपाली भाषी नरहेपछि त्यसको प्रभाव सबै जातगोष्ठीमा पर्नु स्वाभाविक हो। बङ्गालले दार्जीलिङको गोर्खा एकता यहीँदेखि टुक्राउन थालेको हो। अहिले त्यही टुक्रिएको जातगोष्ठीलाई ममता व्यानर्जीको सरकारले जातीय विकास बोर्ड दिएको छ।
हिजोसम्म नेपाली भाषीकोरूपमा समग्र गोर्खाहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न छुट्टै राज्यको दाबी गर्नेहरू अहिले नेपाली भाषामा नै बोलेर ‘नेपाली भाषीहरूले हामीलाई सांस्कृतिकरूपले दमन गऱ्यो’ भनिरहेका छन्।
जुन चिनीमा पिङ्क कलरको विषय खन्याइएको छ। जसलाई झीङ्गाहरूले रमाइरमाइ खाइरहेका छन्। अब के हुन्छ? त्यो पहाडका गोर्खाहरूले नै मन्थन गर्नुपर्ने कुरा हो।